Nampisamboriny ny zandary teny am-pandevenana i Augustin Andriamananoro. Nandevina rafozam-bavy teny Ambohijanamasoandro Itaosy izy ny sabotsy 10 desambra izay natokan’ny Firenena Mikambana ho Andro iraisam-pirenena ho an’ny zon’olombelona, no nanaovan’ny ira-panjakana rodobe nosamborina. Zara raha nahavita teny fisaorana ireo mpanotrona tamin’ny fandevenana ity minisitry ny tetezamita sady filoha lefitry ny vondrona MAPAR ity no nalain’ireo be basy, tsy nampiseho taratasy mikasika izany fisamborana izany. Nisahotaka ny olona, tohina mafy ihany ny fianakaviana satria mbola tena tao anatin’ny fahoriana tanteraka ka saika nisy ny fifandonana teo amin’ny roa tonta. Tsy nanda ny fisamborana azy anefa i Augustin Andriamananoro saingy nangataka izy ny mba hahafahany nandeha amin’ny fiarany miaraka amin’ny mpisolovavany. Vao tafiditra teo Anosizato Andrefana anefa dia nafindran’ny zandary tao anatin’ny fiara 4x4 « Emmo-Sécurité » ity ministra teo aloha ity ary nentina niazo an’i Miarinarivo nanaovana ny fanadihadiana azy, raha nihevitra ny maro fa hoentina eny Fiadanana. Tamin’ny tafa fohy nataon’i Augustin Andriamananoro no nilazany fa tohin’ny raharaha Soamahamanina izay efa nanenjehana azy teny amin’ny foiben’ny haino aman-jery VIVA eny Ambodivona ny 23 septambra 2016 izao fisamborana azy izao. Nambarany fa fiarovana ny tanindrazany no antony nahatongavany sy nanohanany ny mponin’i Soamahamanina saingy dia navadiky ny mpitondra ho fikasana hanongam-panjakana izany. Ny faran’ny herinandro iny ihany dia sesilany ny fanehoan-kevitra nivoaka manodidina ity fisamborana an’i Augustin Andriamananoro ity. Ho an’ireo mpomba an’i Marc Ravalomanana, nitondra faisana tamin’ny tetezamita dia tsy mahagaga azy ireo iny tranga iny, fa ifandimbiasana io ary valin’ny natao, ho an’ny mpiaradia amin’ny filohan’ny tetezamita Andry Rajoelina indray dia fihantsiana no ataon’ny mpitondra HVM, na ny nisamborana an’i Augustin Andriamananoro ny ankatoky ny tsingerintaona faha-6 nahaterahan’ny Repoblika faha-IV fotsiny aza, izy rahateo filoha lefitry ny MAPAR sady filoha mpiara-mitantana ny komitin’y ENY tamin’ny fitsapan-kevi-bahoaka ny 10 desambra 2010. Nanameloka iny fisamborana iny ity vondrona politika ity omaly, tamin’ny fanambarana nataony teny Ambodivona. Tetsy ankilany ny Mpisolovava isany Andrianasolo Andry Fiankinana sy Rabelaza Aldine Andriamisetra dia nandefa taratasy any amin’ny komandin'ny vondrom-pileovan'ny zandary Itasy, omaly, mangata-panazavana amin’ity farany ny antony nisamborana sy nitazomana an’i Andriamananoro Augustin satria tsy naharay taratasy mikasika izany izy ireo, raha tsy izany dia mitaky ny hamotsorana azy avy hatrany ireto mpisolovava ireo satria fitazonana olona tsy ara-dalàna izao mitranga izao. Nanao rodove nidina tany Miarinarivo nijery ny azy ny delegasiona MAPAR omaly tolakandro. Hatreo dia tsy mbola nisy taratasy mazava nisamborana azy, tsy mbola natao fanadihadiana, fa dia tazomina amin’izao fotsiny mampatsiahy ny tetezamita, saingy voakarakara tsara. Ny fianakaviany kosa miahiahy sao tetika ankolaka hanilihana an’i Augustin Andriamananoro izao.